Isigodlo sezwe eladuka - Ukukhwishiza - golf-e-Sun City, IsiGodi sase-Waves
Izinto zokwenza e-Palace of the Lost City, Sun City
E-Palace Hotel, kuneklasi elihle legalofu labantu abathandekayo begolfu obuntshani obuluhlaza, kanye neminye imisebenzi eminingi yezemidlalo.
Kusuka lapha, izivakashi zithola uhlobo oluhle lokukhunjulwa, ukunakekelwa nokunethezeka okuhlukile e-Afrika. Amakholomu amatshe okuhlala e-bamboo ezinyaweni ze-Elephant, agweba izingwe ngamehlo ngamakhasi angaphezu kwezandla eziqoshiwe namatafula.
Izindwendwe ezihlala e-Palace of the Lost City eSun City zigeza kudoti elikhulu noma zigibele phansi ezihlalweni zenkosi eMfuleni wama-Waves. Lesi sikhangiso esiqashelwa yiSun City siyaziwa ngokuba yindawo yokuzijabulisa kwamanzi nomndeni omnandi. IsiGodi sase-Waves sinendawo ekhethekile yabantwana nabagibeli bezemidlalo basemsebenzini ukuqinisekisa ukuthi ukuphepha komndeni wakho.
Hlangana nemithi yokwelapha enokunethezeka e-Royal Salon e-Sun City yokuhlala.
Izakhiwo kule golf-e-Sun City zihlanganisa i-Pro Shop, umkhuba wokubeka uhlaza nobubanzi bokushayela.
Phuza iziphuzo egumbini eliseduze noma kwi-Bar Tusk enomusa futhi udle ngobukhazikhazi e-Crystal Court, lapho ukudla okuhle kuwubuciko obuyigugu. Jabulela ukuhlanganiswa kwe-Afro-French e-mouthwatering e-Plume yokudlela enhle kakhulu ukuze uthole okuhlangenwe nakho kokugcina okuhle kokudlela. Sip nge-champagne emihle ku-Plume Champagne Bar.
Buyisela Emuva - IsabeloDlulisa - Ukubhuka